Sidee loo noqdaa ninka qumman? | Ragga Stylish
Sidee loo noqdaa ninka qumman?
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Lamaanaha iyo Galmada
Ninkee waligiis kuma riyoonin inuu u muuqdo inuu yahay nin qumman? Oo sidaas oo kale sida dumarka oo dhan? Hagaag, waa tayo gelaysa wax aan waxba tarayn, dhalanteed iyo isla weyni, maxaa yeelay jeclaanta ayaa fure u ah awood u lahaanshaha monopolize dhammaan meelaha nagu hareeraysan, ha ahaato mid bulsho ama mid jidheed. Laakiin Intaa ka sii fog waxaa jira xaqiiqo jirta, oo taasi waa in uusan jirin qof ama nin kaamil ah, mar haddii ay tahay yool aad u adag in la gaaro.
Haddii aan ka bilowno xaaladda ragga noocee ah ayaa kaamil ah, taasi waxay ku xirnaan doontaa dhadhanka iyo danaha qof kasta. Qiimeyn madax-bannaan waa in la sameeyaa halka astaamo iyo dhadhammo taxane ah ay la kulmi doonaan oo ka koobnaan doona qiyamka uu dalbaday qofkaas.
1 Maxay dumarku ka fikiraan
2 Sidee loo noqdaa ninka qumman?
Maxay dumarku ka fikiraan
Waxaa laga yaabaa inay ku jirto filashooyinka in haweeneydu u maleyneyso in ninka qumman uu diiradda saarayo qof naxariis badan, qof jecel, oo leh shaqo wanaagsan, caqli badan, guri weyn, gaari fiican iyo dabcan ... taasi waa qurux iyo soo jiidasho, wanaagsan jacaylka sariirta .... blah, blah, blah ... Ma ninkaas baa kaamil ah iyaga? Runtii ma u baahan tahay inaad noqoto superhero si aad u koobto dhammaan sifooyinkaas?
Waxaan ku raacsanahay in dhammaan sifooyinkaasi ay yihiin kuwo gaar ah oo aad wax u dhimaya, laakiin marka la eego aragtida la doonayo, Iyaguna waa inay koobnaadaan dhammaan qiyammadaas oo shaki la’aan na waallidaya. Miyay tahay inaan siino dhamaan astaamahan anaga oo aan helin wax soo celin ah?
Laakiin tani waa mawduuc adag in la caddeeyo, tan iyo waxaa jira rag isku daya inay ka gudbaan caqabadaha oo dhans si heer sare looga gaadho dhan kasta, laguna beddelo kalgacal ama jacayl qof kale. Taasi waa sababta aan u leenahay soo jiidasho taxane ah oo u dhigma kara shakhsiyaddaada oo markaa rafcaan u leh haweenka. Waxaan ku siineynaa isku darka xiddigaha inuu noqdo ninka ugu fiican:
Furaha wax walba waa inaad is muujiso sidaad tahay laakiin adigoon ilaawin inaad ku dari karto taxane dhiirigelin ah: u damqasho naxariis iyo baashaal, maadaama kuwani yihiin furayaasha, is muuji dabiici ah oo caqli badan waxna sii taabasho yar oo xishood ah, taasi waxay kaa dhigeysaa wax lagu jeclaado.
Daraasaduhu waa muhiim. Uguyaraan dumarku waxay jecelyihiin ragga leh caqliga iyo aqoonta. Fikraddu waa in la ogaado sida looga hadlo mowduuc kasta, in lagu falanqeeyo wax kasta oo hareerahaaga ah laakiin aan la buunbuunin falanqayntaada arrimaha (in aad si fiiqan looga baxo waxyaabaha).
Samee isboorti laakiin qiyaastiisa cadaalad ah. Markaad aragto nin naftiisa daryeela waxay lamid tahay dareemida isku kalsoonida taasna waa mid lagu farxo. Waxa aadan jeclayn sida caadiga ah waa muruqyo aad u muruq badan.
Muuqaalka jirka ama muuqaalka waa muhiim. Haddii aad ka mid tahay ragga jecel in gadhka la baxo oo ay kugu habboon tahay, waxaad ogaataa in dumarka badankood ay aad u jecel yihiin. Marka la eego habka labiska, way fiicantahay in la arko nin dabiici ah oo aan bidix fiirin.
Farxad iyo dareen wanaagsan kaftan, adigoon u ekaanin wax lagu qoslo, qof walba waa u roon yahay, jecel qoyskiisa aadna ugu fiirsada kuwa uu jecel yahay. Astaamahan waxaa ka mid ah inuu yahay qof naxariis badan oo is-hoosaysiiya, oo wanaagsan oo aan doqon ahayn oo jacayl lahayn isagoo aan fursad u helin.
Taasi waxay leedahay shuruudo badan oo u gaar ah, nin ay tahay inuu ogaado goorta la gaarayo go'aannada dalbashada iyo mas'uuliyadda leh. Waa inaad ku dhiirrataa dhiirrigelinta oo aad ogaataa goorta aad wax weydiisanayso oo aad dalbanayso waxyaabo laakiin xaaladdu markay tahay gudaheeda.
Jecel xoolaha iyo dabeecadda guud ahaan. Dumarku waxay jecel yihiin ragga yaqaana sida looga shaqeeyo dalka iyo magaalada labadaba.
Sidee shakhsiyan sidoo kale waxaad fiirisaa qofka gudihiisa in badan. Ragga haweenka taageer waxay mudan yihiin dhamaan soo jiidashadooda. Taasi waxay siinaysaa degganaan iyo xasillooni badan, maxaa yeelay nin garanaya sida wax loo dhagaysto ayaa had iyo jeer fiiro gaar ah u leh u fiirsashada xiisaha qofka kale.
Ha iloobin markasta noqo nin jilicsan. Ka taxaddar faahfaahinta noocyadeeda kala duwan, dhunkasho ku bixi gacanta, noqo mid ku qanacsan, ogow sida wax loo cafiyo wax kasta ha yaraatee.
Deeqsinimada ka sarraysa dhammaan. Haddii tayadaas la muujiyo, waxaad helaysaa koobka ugu fiican. Dumarku way argagaxsan yihiin markay arkaan ragga diyaar u ah inay bixiyaan wax ka badan inta ay helaan.
Iska ilaali inaad u ekaato sida xarunta koonka. In kasta oo ay umuuqato mid aan muhiim ahayn, haddana waxaa jira rag, xaaladooda darteed, u aaminsan inay yihiin udub-dhexaadka adduunka. Haddii aad marayso xaalad xun oo aad dhibaatooyin qabto, haweeneydu ma dooneyso nin si joogto ah u niyad jabsan. Sida caadiga ah, waa haweenka doonaya nin iyo garab inuu ku tiirsanaado waana sababta aan ugu baahanahay inaan xoog yeelano.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sidee loo noqdaa ninka qumman?
9 tilmaamood oo qurux badan nin walbana wuxuu u baahan yahay inuu ogaado
Layli jimicsi ragga